इंग्ल्याण्डमाथि भारतको शानदार जित, कुलदीप र रोहितकाे किर्तीमानी प्रदर्शन ! – Everest Dainik – News from Nepal
इंग्ल्याण्डमाथि भारतको शानदार जित, कुलदीप र रोहितकाे किर्तीमानी प्रदर्शन !
असार २९ । भारतले एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा उत्कृष्ट जित निकालेको छ । बेलायत भ्रमणमा रहेको भारतले पहिलो खेलमा उत्कृष्ट जित निकालेको हो । ट्रेन्ट ब्रिज मैदानमा गएराती भएको खेलमा भारतले इंग्ल्याण्डलाई ८ विकेटले हराएको छ ।
इंग्ल्याण्डले प्रस्तुत गरेको २६९ रनको लक्ष्य भारतले ४० ओभर एक बलमा मात्रै दुई विकेटको क्षतिमा भेट्टायो । उसका लागि रोहित शर्माले ११४ बलमा १५ चौका र चार छक्काको सहयोगमा नटआउट १३७ रन बनाए ।
यस्तै कप्तान विराट कोहलीले ८२ बलमा सात चौकाको सहयोगमा ७५ तथा शिखर धवनले २७ बलमा ८ चौकाको सहयोगमा ४० रनको योगदान दिए । कोहलीको कप्तानीमा रहेको भारतको जितमा उनीहरु भन्दा पनि ठूलो नायक बने कुलदीप यादव । उनले इंग्ल्याण्डको पारी निकै धरापमा पारे । पहिले ब्याटिंग गरेको इंग्ल्याण्डले एक बल बाँकी हुँदा सबै विकेट गुमाएर २६८ रन बनायो ।
उसका लागि बेन स्टोकले ५० तथा ज्यासन रोय र जोनी बाइर्तोवले समान ३८ रनको योगदान दिए । तर इंग्ल्याण्डका लागि भारतका यादव निकै सास्ती साबित भए । यादवले मात्रै २५ रन दिएर ६ विकेट लिए । रोहित र कोहलीको उत्कृष्ट ब्याटिंग तथा यादवको शानदार बलिंगले भारतलाई तीन खेलको सिरिजमा १ ० को अग्रता त्यो पनि भव्य जितका साथ दिलाएको छ ।
रोहित इंग्ल्याण्डमा व्यक्तिगत सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीसमेत बनेका छन् । उनने विराटलाई पनि पछाडी पारेका छन् । योभन्दा पहिले विराटले २०११ मा भएको एक दिवसीय खेलमा शतक प्रहार गरेका थिए । कोहलीले ५० खेलको कप्तानी गर्दा सबैभन्दा बढि खेल जिताउने रिकी पोन्टिङ र सी. लार्यडको बराबरीमा पुगाएका छन् । उनले भारतका लागि ५० वान्डेको कप्तानी गरेका छन् ।
यसमा कोहलीले ३९ जित र १० खेलमा हारको सामना गर्नु परेको छ । यस्तै एक खेलको भने कुनै परिणाम आउन सकेको छेन । यस्तै इंग्ल्याण्डमा स्पिनर खेलाडीले एकै खेलमा ६ विकेट लिने कूलदिप यादव पहिलो खेलाडी बनेका छन् । भारतले यसअघि नै ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिज २ १ ले जितेको छ । भारत र इंग्ल्याण्डबिचको दोस्रो एक दिवसीय खेल शनिबार हुनेछ । –एजेन्सी
ट्याग्स: india cricket, India cricket Team, Kuldeep yedav, Rohit shrma